Instagram မှာ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ Bikini Fashion အသစ် – FemaleWear.net
ကမ်းခြေဘဲသွားသွား အိမ်မှာဘဲရေကူးကူး bikini ဝတ်ရတာကြိုက်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် အခု Instagram မှာခေတ်စားနေတဲ့ bikini design အသစ်လေးတွေကို လက်တို့ပါရစေ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ bikini လှလှလေးတွေဝတ်ပြီး ကမ်းခြေတို့ ရေကူးကန်တို့မှာ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ချင်တာလည်း အိပ်မက်တစ်ခုထဲမှာ ပါပါတယ်။ သင်ရော အဲ့လိုအိပ်မက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူလား?
အခုဖော်ပြထားတဲ့ Crystal လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ bikini လေးတွေကိုတော့ SMOOTH BY HAUS OF OTTILIA brand မှ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူဖို့ မလွယ်ကူတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ design လေးတွေကို နမူနာကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာတင်စိတ်ကြိုက် hand made နဲ့ ဖန်တီးလို့ရမယ့် design လေးတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုအောက်မှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်….
$ 329, Top and bottom – XS to XL
$ 239.99, Top and bottom – XS to XL
$309, Top and bottom – XS to XL
$249, Top and bottom – XS to XL
$369, Top and bottom – XS to XL
$199, Top and bottom – XS to XL
$229, Top and bottom – XS to XL
$259, Top and bottom – XS to XL
$299, Top and bottom – XS to XL
$239, Top and bottom – XS to XL
$269, Top and bottom – XS to XL
$209, Top and bottom – XS to XL
$189, Top and bottom – XS to XL
Brand ကိုလေ့လာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် Official website ဖြစ်တဲ့ SMOOTH BY HAUS OF OTTILIA မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Image source : https://www.houseofsmooch.com/collections/
Tags: beach fashion, bikini, crystal, Instagram, swimsuits, The Best Fashion Instagram
Fashion ချစ်သူတွေအတွက် တစ်နှစ်တစ်ခါ မဖြစ်မနေသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သော Fashion Week အကြောင်း…